aung myo set : Huawei U8818 ကို 4.1.2 နဲ့ လန်းချင်သူများအတက်
U8818 ကို Custom Firmware 4.1.2 တင်လို့ရပါပြီ။
အရင်ဆုံး U8818 က 4.၀ အနေအထားမှာဆိုရင်
CWM အရင် သွင်းရပါမယ်….
CWM Installer (Mediafire)
CWM Installer (DropBox)
Volume Down + Power ကိုဖိနှိပ်လိုက်….
CWM Installer ကို Extract လုပ်လိုက်ရင် .bat ဖိုင်လေးတွေလိမ့်မယ်….
ဒါကို Run လိုက်ရင်ရပြီပေါ့။
ပြီးရင်တော့ Custom Firmware လေးကို ဒေါင်းရမယ်..
ပြီးရင်တော့ SD Card ထဲထည့်လိုက်မယ်…
Volume up + Power နဲ့ Recovery mode ၀င်လိုက်မယ်…
Install from SD Card ကို ရွေးလိုက်မယ်..
Wipe Cache နဲ့ Wipe Factory Reset ချလိုက်မယ်..
Reboot System Now ရွေးမယ်..
မြန်မာစာထည့်ရင်တော့ Zawgyi Changer နဲ့မရဘူး..
ဒါလေးဒေါင်းပြီး CWM ကနေထည့်လိုက်ပါ။
Posted by နည်းပညာစုစည်းမှု at 8:25 AM